I-Astronomerology. Indlela yokuhlela ngempumelelo usuku
Ufuna ukuhlela usuku lwakho, ngokusho kwezingqinamba zezinombolo, amaplanethi nezinkanyezi, ukuze usebenzise kakhulu wonke amathuba akhe? Inqubo entsha kunazo zonke ze-astronomyology yilokho okudingekayo kule njongo. Kodwa mayelana nakho konke okuhlelekile.
I-astronomerology yi-fusion yezindlela ezimbili zesayensi: ukubhula ngezinkanyezi futhi, ngokufanele, ukubhula ngezinombolo. Isimo esiyinto yonke, umcimbi noma into ingahlaziywa futhi ichazwe, uma senza izibalo ezilula. Manje sinesithakazelo ngomhla ka-DATE. Ake sithi ucabanga ukuthi kungcono ukuthatha usuku oluzayo nakusihlwa. Buza umphathi mayelana nokwanda kweholo? Noma kungcono ukuhlela umhlangano nom fan (fan)? Futhi, ekugcineni, angaqala yini ukufundisa olunye ulimi? Ngeke uphazamise ukukhetha kwezenzakalo, uma ufunda usuku oluthile ngokuvumelana nemithetho ye-astronomyology. Ukwenza lokhu, bhala eshidi ngosuku, inyanga nonyaka okukuthandayo. Isibonelo, kulesi sihloko ngizokubala ngomhla kaDisemba 21, 2012 - usuku lapho abanye abantu balindele ukuqala "kwelanga". Uzokwazi ukuyihlela!
Ngakho-ke, kuyadingeka ukwengeza zonke izinombolo ezirekhodiwe: 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 1 + 2 = 11. Kwenziwe. Iyiphi isici senombolo 11 ekubaleni kwamanani okufunda?
Okokuqala, libhekisela ezinombeni eziphezulu (kanye no-22, 33 nezinye ezifanayo), ngakho-ke, zinikeza izimfanelo ezikhethekile.
Okwesibili, 11 inezinhlangothi ezimbili: linikeza amandla amakhulu okudala nendlela yokuphuma ejwayelekile, ukukhanya okukhanyayo, kodwa kungabangela ukucindezeleka nokuxabana. Ngaphezu kwalokho, noma yiliphi inombolo ephezulu kunciphisa ukulingana okulinganayo: 11 = 1 + 1 = 2. Kodwa i-deuce yi-vibration esithambile ngokwanele futhi ekhululekile.
Kungaba kuhle ukuzinikela usuku lokuxhumana nomuntu othandekayo futhi othandekayo, ngoba 2 yiyona amandla omshado. Ubulili buyadingeka, uma kungenxa yothando. Nokho, inkampani ingaba nokuphumula okuhle. Yebo, uma unamandla okudala, bhala "ekupheleni kwezwe" ukubhala umbiko, izinkondlo, umculo nezinye "ubuciko." Nje ungazitholi emathonyeni amanye abantu, ungesabi izimo ezicindezelayo.
Manje sizofunda ukududuza kweplanethi yosuku. Kule nombolo 11 isusa lezi eziyisishiyagalolunye, ngoba ukubhula ngezinkanyezi kusebenza ngokuyinhloko ngamaplanethi ayisishiyagalolunye. Luzophinde lube yi-deuce. Lona iplanethi Luna. Unesimo sengqondo esinomusa nangokomzwelo ukuthi sekuyisikhathi sokuletha into emnandi emphefumulweni wakho ohlwini lwamacala ngoDisemba 21, 2012. Isibonelo, ukubukela ifilimu yothando. Kungaba yedwa nomngani noma umngane endaweni yaseshashalazini.
I-Luna nayo ibhekene namandla omfazi, amandla angenamandla. Ukuxhumana nobulili besifazane - kuyasiza! Futhi ukhumbule ukuthi le planethi ihlotshaniswa namanani omndeni namasiko. Ngakho-ke, vakashela izihlobo zakho, uhlale indebe yetiyi kumbuthano ofudumele owaziwayo. Kungani kungenjalo ingilazi noma ama-vodka amabili? Okokuqala: kuyingozi empilweni. Okwesibili: Inyanga, iplanethi "yamanzi" kakhulu (ngenxa yezidakamizwa zayo, ama-ebbs kanye nama-tide ayenzeka eMhlabeni), ingabangela ukungalingani emzimbeni nase-psyche, ezwela kakhulu utshwala. Ngakho qaphela ngalokhu. Ngendlela, ezinsukwini zeNeptune, utshwala bubuye buqatshelwe! Ugcwele inkinga eqinile yokuqonda.
Ngokuqondene namaplanethi, uhlala ukhumbula ukuthi ukubalwa kwezinkanyezi ku-astrology zakudala: 1 - Ilanga, 2 - inyanga, 3 - Mars, 4 - iMercury, 5 - Jupiter, 6 - Venus, 7 - Saturn, 8 - Uranus ne-9 - i-Neptune. Uma, lapho uhlanganisile zonke izinsuku zosuku lokutadisha, thola inhlanganisela yamadijithi amabili, thatha ama-nine kusukela kuwo kuze kube yilapho uthola inombolo yenombolo. Uyazi ngekhwalithi yezindikimba zasezulwini, uma ufunda lo msebenzi. Kodwa ukuthola incwadi eqondisisa izinkanyezi ezihlakaniphile - ayilokothi ibuhlungu! Ama-nuances amaningi athathwa uma uhlela usuku.
Futhi manje sizofunda isibonakaliso senkanyezi "usuku lokuphela kwezwe". Ukuxazulula inkinga enjalo, umuntu kufanele aphinde ahluleke imemori: inombolo 11 ihambelana no-Aquarius e-Zodiac. Ngilungile? Amalungelo. Akukho lutho olungasusa lapha. U-Aquarius ubonakala emkhakheni wokudala, izinto eziqanjiwe, ukutholakala kwesayensi. Lokhu futhi uthathwe uma kunesimo esinqunyiwe! Futhi u-Aquarius uyisiqalo se-Zodiac. Kubalulekile ukugqoka ukugqama, ukuphambana kakhulu, nokushaqeka (kodwa wazi isilinganiso: kubonakala kungenangqondo kumuntu osekhulile ogcwele ama jeans ajwayele ukujwayela kanye ne-braid nge-baubles). Usuku luyakuthanda ukuxhumana enkampanini, ikakhulukazi ujabule. Njengoba ubona, ukuhlaziywa kosuku ngomhla ka-21.12.2012 kusinike ulwazi oluthe xaxa ukuze kusetshenziswe ngempumelelo nokubhala ngokuphathelene nokuhlelwa kwamandla (nokudlidliza).
Kodwa lo mbuzo wawubekwe emoyeni: "ukuphela kwezwe" kuzokwenzeka kulo nyaka? Noma cha? Uyazi, i-apocalypse yayibikezelwe kusukela ezikhathini zasendulo kakade sekuphindwe izikhathi eziningi. Futhi akukho - sihlala. Ngiyaqiniseka ukuthi sizoqhubeka nokuqhubeka. AmaNdiya aseMeya angasixwayisa nje ukuthi inkathi eyodwa izophela - kanti entsha izoqala. Yiyiphi? Sizobona.
Thola izindlela zokupheka kwabesifazane
Futhi kungani abantu abanonya kangaka bebubele
Abesifazane bamadoda amakhulu
Fortune utshele amantombazane ephepheni
I-karma, uthando lwe-karmic nesiphetho
Kungani umuntu ofana nesimo sezulu esibi?
I-Creme brulee nge-lavender noju
Hillary Clinton - biography, ukuphila komuntu siqu, amaqiniso angaziwa, izitatimende ngeRussia noPutin
Kungcono kakhulu ukuvikela ngesikhathi esisekuqaleni kokukhulelwa
Izitshalo zangaphandle: eschinanthus
I-Perfect egcwele izithelo isaladi izithelo
I-charter enobuciko yezinhlobonhlobo zezinto zokucweba u-Diane Kordas
Amaqebelengwane enyama yengulube abhakawa ngamazambane ahlambulukile
Kuthiwani uma ingane ingenasithakazelo kontanga?
Ifilimu Brigade 2 - Inganekwane noma Eqinisweni
Indlela elula yokulahlekelwa isisindo: iseluleko somqondo wezengqondo
Ukubonakaliswa kokuhlukunyezwa kwenja kumntwana
Yini ongayenza njengesipho esivela eThailand?
Amavithamini namaminerali ekudleni komntwana
Yeka isimanga! UVera Brezhneva ubonise isisu sakhe esikhulu, isithombe
Ukuzalwa kwe-jaundice enganeni encane